Torolàlana momba ny dia mankany Udaipur India - Tanànan'ny Farihy
Any amin'ny fanjakan'i Rajasthan, tanànan'i Udaipur matetika fantatra amin'ny anarana hoe the Tanàna Lakes Raha jerena ny lapany manan-tantara sy ny tsangambato naorina manodidina ny rano voajanahary ary koa ny vatan-drano nataon’olombelona, ​​dia toerana iray antsoina mora foana hoe Venise any Atsinanana.
Saingy ny tantaran'ny fanjakana sy ny kolontsaina voaravaka dia mihoatra noho izay hita any amin'ny toerana hafa. Amin'ny maha-tanàna farihy kelin'i India azy, ny dia mankany Udaipur dia fitsangantsanganana mangina amin'ny tantaran'ny firenena, zavatra tian'ny mpandeha hojerena rehefa mandeha any Atsinanana. Mandehana mandeha kisendrasendra manodidina ny lalan'ny lapa satria ny masoandro milentika mandrakotra ny tanàna amin'ny hazavana tsara tarehy, ary mety ho mahagaga fa na dia ity zavatra kely ity aza dia mahatsapa ho toy ny traikefa tsy hay hadinoina ao India!
Lapan'ny tanànan'i Udaipur
Miorina eo amoron'ny Farihin'i Pichola, ny Lapan'ny Tanànan'i Udaipur dia mijoro tsara miaraka amin'ny lavarangana sy tilikambony manome fomba fijery mahafinaritra momba ny farihy manodidina. Ny lapa dia misy lapa lehibe efatra sy lapa kely maromaro, miaraka amin'ny fitambaran'ny tsangambato lehibe tamin'ny taonjato fahavalo. Ny ampahany lehibe amin'ny lapa dia mampiseho fanangonana zava-kanto ara-tantara.
Namboarina nandritra ny efa-jato taona, ny maritrano mahagagan'ny lapa dia vokatry ny fandraisan'anjaran'ny mpitondra maro tamin'ny taonjato faha-8. Dynastie Mewar any Andrefan'i India. Tsangambato manan-tantara maromaro no eo akaikin'ny tranoben'ny lapa, miaraka mahatonga azy io ho toerana manan-tantara lehibe.
Iray amin'ireo lapa tsara tarehy voahodidin'ny Farihin'i Pichola, ny Lapan'ny Farihy no toerana fahavaratra tamin'ny tarana-mpanjaka Mewar, izay trano fandraisam-bahiny niova fo amin'ny sambo ihany. Trano fonenana manan-tantara maro hafa tamin'izany fotoana izany ihany koa no hita eo akaikin'ny farihy, izay mahatonga ny tanàna ho mora sy mahafinaritra hojerena.
Inona no atao hoe Visa Indiana amin'ny fahatongavan-tena?
Galerie sy tranombakoka
Na dia mampahatsiahy ny tantaran'ny fanjakan'ny fanjakana aza ny lapa tsara tarehy ao an-tanàna, ny tranombakoka sy ny galleries kanto mahafinaritra ao an-tanàna dia tsy latsa-danja amin'ny famirapiratana ary azo antoka fa manana an'io antony io izay mahatonga azy ireo ho tsy maintsy tsidihina amin'ny dia mankany Udaipur.
Ny Crystal Gallery dia toerana iray voatahiry tsara nandritra ny zato taona, fony ny Mpanjakan'i Mewar tamin'ny faramparan'ireo taona 1800 dia nanome baiko ny fanangonana zavakanto kristaly avy any ampitan-dranomasina fa taorian'ny nahafatesan'ny mpanjaka ihany no tonga ireo vakoka.
Raha nihevitra an'i Udaipur ho tanàna tranainy ianao ary ny tranombakoka tantara dia mety ho zavatra farany tianao hojerena amin'ny fialan-tsasatra, dia eto ny Museum Vintage Car ao an-tanàna mba hanova ny hevitrao.
Ny tranombakoka dia manana fanangonana fiara tranainy roa amby roapolo mahery manomboka amin'ny Rolls Royce ka hatramin'ny Mercedes Benz sy ny maro hafa. Ny toerana ihany koa dia miaraka amin'ny Garden Hotel miaraka amin'ny safidy tsara handany ny tolakandro.
Ny tanànan'i Nagda, eo amin'ny roapolo kilometatra miala ny tanànan'i Udaipur, dia ny tanàna tamin'ny taonjato faha-10 izay tanàna nalaza taloha teo ambanin'ny tarana-mpanjaka Mewar. Toerana ahitana rava tempoly maromaro hatramin'ny fotoana niparitahan'ny zaridainan'ny tranoheva ilay tanàna. Ny Nagda dia fantatra indrindra amin'ny sisan'ny Tempolin'i Sahastra Bahu, natokana ho an'ireo andriamanitry ny Fanjakana tamin'izany fotoana izany.
Renivohitry ny tarana-mpanjaka Mewar tamin'ny taonjato faha-8 ilay tanàna ary nitohy hatrany mandra-pandravan'ny fanafihan'ny vahiny avy any Azia Afovoany ilay toerana. Ny toerana manan-tantara dia feno firafitry ny tempoly miparitaka amin'ny faritra malalaka misy rakotra ala maitso, izay mahatonga azy io ho toerana tsara hijerena ny voninahitry ny andro taloha amin'ny fahanginana rehetra.
Elisa Visa any India
Antsoina koa hoe Paradisa vorona ao amin'ny fanjakan'i Rajasthan, Ny tanànan'i Menar izay lavitra ny tanànan'i Udaipur dia fialofana ho an'ny vorona mpifindra monina amin'ny volana ririnina.
Any amin'ny dimampolo kilometatra miala an'i Udaipur, paradisa miafina ny toeram-ponenan'ny vorona Menar izay matetika tsy hitan'ny mpizaha tany amin'ny ankapobeny. Lasa fonenan'ny vorona mpifindra monina mahagaga ny farihin'ny tanàna, anisan'izany ny sasany tsy fahita firy toy ny Great Flamingo, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana tsara indrindra hijerena vorona.
Mba hanampiana zava-misy mahagaga avy ao an-tanàna, ireo mpahandro avy any Menar dia niasa ho chef an'ny fianakavian'ireo miliaridera Indiana maro. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana ny tanàna dia ny volana ririnina rehefa mirohotra amin'ny faritra ny vorona isan-karazany, izay fotoana tsara hitsidihana ny tanàna Udaipur ihany koa.
Raha jerena fa ny tsangambato iray ao an-tanàna dia mifandray akaiky amin'ny iray hafa, mandehana fotsiny manodidina ny farihy manodidina, rafitra manan-tantara sasany ary mety hitondra anao irery any amin'ny toerana tsara rehetra.
Noho ny firafitry ny tanàna lehibe naorina manodidina ireo farihy no nahatonga ilay toerana nantsoina hoe ny City of Lakes, ary raha Venise avy any Italia no tonga ao an-tsainao dia hafa noho izany izany. Miaraka amin'ny tsangambatony tamin'ny taonjato faha-8 sy ny fahitana an'i India mpanjaka, dia lasa nofinofin'ny mpikaroka marina tokoa i Udaipur.